လုပ်ကြံရေးသားထားတဲ့ ဗိုလ်တထောင်စေတီတော် ပြဿနာ
မေလ ၂၄ ရက်နေ့က ဗိုလ်တထောင် ဆိပ်ကမ်းမှာ ရှင်ဥပဂုတ္တ ဖောင်တော် ရေချ မင်္ဂလာနဲ့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရား ဘက်စုံ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု၊ အစ်မတော် မြနန်းနွယ် ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေလုပ်ရာမှာ လူစုလူဝေးဖြစ်စေခဲ့ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး စည်းကမ်းချက်တွေကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုကာ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြည်သူများအကြား ဝေဖန်မှုများရှိနေခဲ့ပါတယ်။
| 13 Jun 2020 4:42 AM GMT
ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဝေဖန်မှုတွေပိုမိုအရှိပြင်းထန်လာစေဘို့ ဒါမှမဟုတ် အခြားနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုမှုလို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအပြင် တကိုယ်ရေ နာမည်ကြီးလိုမှု၊ မိမိဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် follwoer တွေ များစေဘို့ရည်ရွယ်ပြီး သတင်းအမှားတွေဖန်တီးကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်ဖြန့်ဝေလာနေကြတာ တွေ့လာရပါတယ်။
ဒီလိုဖြန့်ဝေရာမှာ လတ်တလောဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဗိုလ်တထောင် ကျိုက်ဒေးအပ် ဆံတော်ဦးစေတီတော်ရင်ပြင်ရှိ ဆိပ်ကမ်းဓမ္မရုံစေတီတော် ဘက်စုံပြုပြင် မွမ်းမံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ် ဦးတည်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ဇွန်လ ၇ ရက် နေ့လည် ၂ နာရီ ၃၈ မိနစ်မှာ မိုး မိုး ဆိုတဲ့ ဖေစ့်ဘွတ်အကောင့်က ဒီလိုသတင်းအမှားမျိူးရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။။ ဒီသတင်းရဲ့ အတွင်းမှာတော့ "ဘုရား ပတ်လည် မှာ လည်း အရန်စေတီတွေ အားလုံး ဖြိ ုချထားပြီး------- ပြီ😭😭😭 အဲ့တာ နဲ့လုံခြံ ုရေး အစောင့် ရဲ ဝန်ထမ်း လေး ကို ကျွန်မက ---- မေးခဲ့ပါတယ် မောင်လေးရေ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရား က အရန် စေတီတွေ ဘာ့ကြောင့်ဖြိ ုတာလဲ သိလား ရှင်လို့ မေးတော့ ရဲဝန်ထမ်းလေး က ပြန်ဖြေပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ "အရန်စေတီတွေကသေးလို့ ဖျက်တာတဲ့" ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားဆို တာ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဘုရား ဆိုတာ မသိကြတာလား? ဘုရားစေတီ ဆိုတာ တည်ပြီးရင် သေးလို့ပြန်ဖျက် လိုက် ပြန်တည်လိုက် လုပ် လို့ရသလား? ပြုပြင် မွမ်းမံပြီး စေတီသေးငယ်တာကို ကြီးလို့ရော မရနိုင်ဘူးလား? အခုလို ကပ်ရော ဂါ တွေဖြစ်နေချိန်မှာ ဘာ့ကြောင့် ဘုရားစေတီကို အသည်းအသန်ဖျက် အသည်းအသန် လုပ်နေတာလဲ? အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ စဉ်းစားမရ ဖြစ်ခဲ့မိတယ် ။" လို့ လိုသလိုပုံဖော်ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မူရင်းဖြန့်ဝေမှုကို ဒီနေရာ နဲ့ ဒီနေရာ မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ မေလ ၂၄ ရက်နေ့က ဗိုလ်တထောင်ဘုရား ဘက်စုံပြုပြင်ရေး လုပ်ဆောင်ရာမှာ လူစုလူဝေးဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက် COVID -19 ကာလ လူစုလူဝေး မပြုလုပ်ရန် အစိုးရရဲ့တားမြစ်ချက်ကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုပြီး လူထုအကြား၊ NLD ပါတီကြားအပြင် သမ္မတရုံးနဲ့ပါ ထိပ်တိုက်တွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန် ဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းဟာ မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အပြင် တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ကြံရေးသားဖြန့်ဝေထားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ တားမြစ်ချက်ကိုမလိုက်နာပဲ လူစုလူဝေးနဲ့ ဘာသာရေး အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို ပါတီအနေဖြင့် သတိပေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်က ပြောတယ်လို့ ဘီဘီစီ သတင်းဌာန စာမျက်နှာမှာ မေလ ၃၁ နေ့က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မူရင်းသတင်းကို ဒီနေရာ မှာ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို အရေးယူပေးရန် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက လွှတ်တော်တွင်အဆိုတင်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရဘက်ကလည်း ဖြေရှင်းမှုအစီရင်ခံစာ တင်ပြရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အကောင့်ပိုင်ရှင် မိုး မိုး ရဲ့ ဖြန့်ဝေထားတဲ့ ပိုစ့်အောက်ရှိ မှတ်ချက်အများစုက ရေးသားပြောဆိုချက်ကို မထောက်ခံပဲ ချေပပြောဆိုထားသည်များရှိသော်လည်း ၎င်းက လက်မခံပဲ အဆိုပါပိုစ့်ကို ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပြီး တုံ့ပြန်ထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာ နဲ့ ဒီနေရာ မှာ ကြည့်ရှု့ပေးပါ။
တကယ်တော့ ဒီပိုစ့်မှာ စွပ်စွဲရေးသားထားတဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ ဘုရားပတ်လည်က အရန်စေတီတွေအားလုံး ဖြိုချထားတယ် ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ရေးသားမှုအရ ဘုရားသို့ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့ပြီး ဖြိုချခံထားရတဲ့ အရန်စေတီတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့သယောင် ရေးသားထားတဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံတွေကို စိစစ်ကြည့်ရာမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဖေစ့်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ မေလ ၂၇ ရက်နေ့က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပုံတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်ရင် ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ ဒီပုံတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တာ အကောင့်ပိုင်ရှင် မိုး မိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ ဒါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဖေစ့်ဘွတ်စာမျက်နှာက ပုံတွေဆိုတာပါပဲ။
BOOM အနေနဲ့ သက်သေပြနိုင်စရာအချက်တွေကို ထပ်မံရှာဖွေ ကြည့်ရာမှာ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ တရက်တည်းမှာပဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်လှမြင့် (ဖေစ့်ဘွတ်အကောင့် Khin May Kha) က သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်မှာ အထက်ပါပုံတွေကို အသုံးပြုကာ ပိုစ့်တင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ကလည်း ဒါကိုသူ့ရဲ့ အကောင့်မှာ ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံမှာ ပါဝင်တဲ့ ဒေါ်ခင်လှမြင်ရဲ့ ရေးသားမှုမှာ "ဗိုလ်တထောင်ကျိုက်ဒေးအပ် ဆံတော်ဦးစေတီတော်မြတ် ကြီးဘက်စုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းနှင့် မဟာဇေယျသိဒ္ဓိ မေတ္တာရှင်မုနိ မြတ်စွာဘုရားတန်ဆောင်းကြီး (အမတော်မြနန်းနွယ် ဘုရားတန်ဆောင်းကြီး) ဖြိုဖျက်နေခြင်းများ" လို့ရေးသားထားတဲ့ အတွက် အကောင့်ပိုင်ရှင် မိုး မိုး ရဲ့ပိုစ့်ထဲမှာ ရေးသားထားသလို ဘုရားပတ်လည်က အရန်စေတီတွေအားလုံး ဖြိုချထားတယ် ဆိုတာ လိမ်လည်ရေးသားခဲ့ကြောင်း ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ ဖြိုချထားမှုတွေဟာ အမတော်မြနန်းနွယ် ဘုရားတန်ဆောင်းကြီးကို ဖြိုနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်လှမြင်ရဲ့ ရေးသားဖြန့်ဝေမှုကို ဒီနေရာ မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးသိန်းရဲ့ ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေမှုကို ဒီနေရာ မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ဆန်းစစ်ဘို့ အဓိကကျတဲ့ ဗိုလ်တထောင်စေတီတော် ဂေါပကထံ BOOM က ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါသော်လည်း ဂေါပကအဖွဲ့အနေနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ ပြောဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်ရဲ့ ဖေစ့်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာလည်း မေလ ၃၁ ရက်နေ့ကတည်းက ကြေငြာထားတယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်တထောင်ကျိုက်ဒေးအပ်ဆံတော်ဦးစေတီတော် ဘက်စုံပြုပြင်တည်ဆောက်မှုအခြေအနေနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ ဖေစ့်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ မေလ ၂၇ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားပြီး ဒီနေရာ မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Updated On: 2020-06-23T23:19:28+05:30
Claim : ဗိုလ်တထောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ ပုံများအသုံးပြုကာ သတင်းမှားဖြန့်ဝေနေတဲ့အတွက် BOOM က သတင်းဆန်းစစ်တင်ပြထားပါတယ်။
Claimed By : ၤFacebook, Website
Botahtaung Pagoda Yangon Region Government Chief Minister Covid-19 religious event Botahtaung Jetty